Warshad Soo Bandhigida EB Tube | Shiinaha EZ Soosaarayaasha Soosaarayaasha Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaal
Mawjadaha soo baxa ee dharka qalooca waa nooc ka mid ah aaladaha soo-ban-dhigga ee hal-abuurka leh oo farriintaada ku gaarsiin kara qaab muuqaal ah Ku habboon in loo isticmaalo bandhigyada ganacsiga, bandhigyada ama tafaariiqda tafaariiqda, istaagga boodhka dharka waa mid fudud in lagu soo ururiyo qaab daabacan oo dhar daabacan.
Meel caan ah oo daabacan ayaa kuu oggolaaneysa inaad ku raaxeysato soo-saarka ugu weyn. Bandhigga tubbada dharka ee xiisaha leh oo leh garaafka gaarka ah ayaa runtii laga dhex arki karaa dadka badan.
Kuxiran cabbirka weyn iyo qaabka gaarka ah, muuqaalka dharka xiisada qallooca ayaa had iyo jeer kuu soo bandhigi kara muuqaal il-qabad leh iyo neef qaadasho, taas oo isla markiiba noqon karta diiradda dadka.
Tallaabada iyo dib-u-soo-celinta waxay kaa caawineysaa inaad abuurto sawir muuqaal ah oo qumman. Tan, waxaad ku horumarin kartaa astaantaada iyo ganacsigaaga heerka xiga. Tallaabadeenna iyo dib u soo celinta boodhadhkeenna hore waxay ku habboon yihiin filimaanta, dhacdooyinka soosaarida alaabada cusub, xafladaha dhalashada ama meel kasta oo aad rabto astaantaada hore iyo xarunta.
Soo bandhigida cabbirka daabacaadda oo aad u wanaagsan iyo naqshadeynta sheeko cusub, istaagga boodhka dharka ayaa badanaa loo isticmaalaa sidii gidaar bandhig ama derbiga asalka ah. Meel kasta oo aad dhigatid meel lagu arbusho oo dhar ah, gudaha suuqa laga dukaameysto, dukaankaaga hortiisa, ama bandhigga ganacsiga, waxaad si deg deg ah uga soo jiidan doontaa dadka wadada maraya.
Calanka Tooska ah ee Calanka Dharka leh oo leh saldhig culus wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku raaxaysato bandhig joogto ah. Si fudud loo dejiyo oo ku habboon in la beddelo sawirada.